Uyakhula umkhankaso wokuvalwa kwe-ANN7 yamaGupta kuDStv | News24
Uyakhula umkhankaso wokuvalwa kwe-ANN7 yamaGupta kuDStv
Johannesburg – Umkhankaso oqhutshwa online (petition) oqalwe ezinsukwini ezingu-5 ezedlule ngamakhasimende eDStv wokuthi kukhishwe isiteshi sezindaba i-ANN7 eziteshini ezitholaka kuDSTV ususayinwe ngabantu abangaphezu kuka-11 000.
Laba abaqhuba lo mkhankaso bafuna ukuthi lesi siteshi sikhishwe kuDStv njengoba besisola ngokuthi “sichemile futhi sidala uqhekeko ezweni”.
Bagxeke kakhulu indlela lesi siteshi esibika ngayo izindaba nabathi “sisabalalisa ulwazi oludukisayo nolunombono othile wezepolitiki” uma ngabe sibika ngezindaba zezepolitiki, bathi bona abasafuni ukuqhubeka nokukhokhela lesi siteshi sezindaba esiphethwe abakwaGupta baphinde banxusa noDStv ukuthi “ungazeseki izindaba ezingombombayi”.
OLUNYE UDABA:‘Abangani’ bamaGupta abahlanganise ‘umbiko’ oxoshise uGordhan
“Ngiyaphikisana nokuthi i-ANN7 ibe yingxenye yokutholakala kuDStv. Banikeza ngokuphelele izindaba ezingumbombayi futhi lokhu abakwenzayo kufana nokusethuka,” kusho uJenny Zaidel.
UBerne Nightingale uthe “I-ANN7 yisiteshi esisabalalisa ulwazi oludukisayo nolunombono othile kwipolitiki, akumele kudingeke ukuthi ngisikhokhele”.
U-Elise Hattingh ube esengeza ngokuthi: “Lo doti ucekela phansi izwe lethu”.
Ngale kwalokho, i-ANN7 sekube kaningana igubuzelwe yizigameko abanye abathi ukubika okungekho ezingeni elifanele okwenziwa izintatheli ezingamavukana, amaphutha okubhalwe phansi, ubuhixihixi bemishinini kanye nasemoyeni, kanye nokubika okungelona iqiniso.
UMultichoice uthi uma kukhona izikhalo ngokubikwayo esiteshini kumele zidluliselwe ku-BCCSA, wathi wona awukwazi ukulawula okubikwayo.
I-ANN7 ithe angeke ikwazi ukuphawula okwamanje ngoba isafuna ukuxhumana nenkampani eyikhulumelayo kuqala.